Global Voices teny Malagasy » Rehefa Manomboka Miteny Ireo Vahoaka Tsy Manan-kialofana Ao Rosia · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 06 Oktobra 2016 2:11 GMT 1	 · Mpanoratra Darina Gribova Nandika avylavitra
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Rosia, Mediam-bahoaka, Vonjy Voina, Akon'ny RuNet
Ryabtseva dia mitantana tranonkala iray antsoina hoe “Hadalàn-dry Zareo ny Azy ,” toerana amoahany ireo tantara azony avy amin'ireo olona tsy manan-kialofana ao an-tanàna sy ireo mpirotsaka an-tsitrapo ao amin'ilay toeram-pialofana. Tao anatin'ny taona roa, manodidina ny 40 no voaangony tamin'ireny tantara ireny. Ny anaran'ìlay tetikasa dia natao hisintonana ilay toetsaina tsy miraharaha ananan'ny ankamaroan'ny olona momba ireo tsy manan-kialofana.
Raha sarotra ho azy ny nahita izay hamoaka ny asany, dia milaza i Ryabtseva fa adintsaina henjana maro koa no atrehany rehefa miresaka amin'ny sasany amin'ireo olom-peheziny izy. Ohatra, ny tafa voalohany nifanaovany tamin'ny lehilahy iray antsoina hoe Sergey , izay nahiliky ny fianakaviany hivoaka ny tranony, ary lasa teny an'arabe. Taorian'io fihaonana io, dia lazain'i Ryabtseva fa tsapany ho mitafy mihoatra noho izay mora indrindra eny an-tsena izy, angamba noho ny fieritreretana ny mba hifanaraka kokoa.
Tafa iray hafa lazain'i Ryabtseva fa “faran'izay tena manandanja” ho an'ny tetikasany ny nifanaovany tamin'ny lehilahy iray antsoina hoe Dmitry , mpahay maritrano lasa tsy manan-kialofana ary nandà ny ho alaina sary. Raha ianao no nahita an'i Dmitry teny an'arabe, hoy izy, tsy ho ao an-tsainao velively ny hoe olona tsy manan-kialofana izy. “Raha ny marina dia iray amin'ireo olona tena nahita fianarana nihaonako hatramin'izay izy,” hoy i Ryabtseva. “Nihevitra ny tenako ho toy ny mpianatra iray manoloana profesora aho, rehefa injay izy nitanisa ny Testamenta Taloha sy nilaza tamiko ny filaozofiam-piainany.” Nambaran'i Ryabtseva fa lasa namonjy monastery izy taty aoriana.
Marobe tamin'ireo olona nitafàn'i Ryabtseva no naneho fisaorana mitafotafo ireo mpirotsaka an-tsitrapo amin'ireo toeram-pialofana manerana an'i St. Petersburg. Andrey Almasov , lehilahy iray 46 taona, mpangalatra taloha, nilaza taminy momba ny niverenan'ny finoany ny olona:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/10/06/89549/
 Hadalàn-dry Zareo ny Azy: https://homeless.ru/theirownfault/